ဂယက္ထေန တဲ့ ဘရာဇီယာ မပါပဲ ကလပ္ ကေန Live လႊင္ျပတယ္ ဆိုေသာ ရွင္ယြန္းျမတ္ – Let Pan Daily
ဂယက္ထေနတဲ့ ဘရာဇီယာမပါပဲ ကလပ္ ကေန Live လႊင္ျပတယ္ဆိုေသာ လုံးႀကီးေပါက္လွေမာ္ဒယ္ ရွင္ယြန္းျမတ္ ဗီဒီယိုLive လႊင္ၿပီး ၅ မိနစ္အတြင္း ျပန္ဖ်က္ခဲ့ေပးမယ့္ ပရိတ္သတ္ေတြ အၾကားပ်ံႏွံသြားၿပီး ယခုလို ေရပန္းစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ကာယကံရွင္ ရွင္ယြန္းျမတ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ေနာက္ဆို Live လႊင့္တာ ဆင္ျခင္သြားပါၿပီး ဆိုၿပီး ယခုလို post ေရးတင္ထားပါတယ္။808 ေန႔က liveလႊင့္မိပါတယ္..လုပ္မိလုပ္ရာ တင္ၿပီးး ၅မိနစ္ေလာက္ေနေတာ့ ဖ်က္ခိုင္းၾကလို႔ ဖ်က္လိုက္တယ္
ဒါကို အခုမွ ဘယ္ကရလို႔လာတင္ေနၾကတာပါလိမ့္ ကိုယ္က မ်က္ႏွာပဲၾကည့္မိတာအျပင္မွာ အဲ့ေလာက္ အက်ႌ မပါးးသလိုလည္း ပါ ပါတယ္….အဲ့ဒီလို လည္ပင္းးအၿပဲ အဟိုက္ေတြ နဲ႔ ဝတ္တဲ့ဟာမ်ိဳးး ဝတ္ထား ပါတယ္အရက္ေသစာလည္း မေသာက္မူးယစ္ေဆးဝါးလဲ မသုံးထားပါဘူးးး
စုံတြဲႀကိဳးၾကာက ေကာ္ဖီေသာက္ၿပီးး ကဲတာရေသာက္နည္းလို႔ ႏႈတ္ခမ္းေျခာက္လို႔ လွ်ာသက္တာပါ…. မ်က္လုံးကလဲ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ထား လ္ု႔ပါ….ရႈတင္ကအျပန္ဝင္မိတာ ေနာက္ေနာင္ live ဆိုဆင္ျခင္ၿပီမစာမနာေတြ သိပ္မန႔္ၾကတာဖတ္ရတာ စိတ္မေကာင္းဘူးးအဝတ္အစားဝတ္တာဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ဝတ္ေတာ့မယ္အဲ့ေန႔က အဲ့လို ဝတ္မိတာ..,ပုံထဲ သိပ္မဆိုးးလွပါဘူးေလဆိုၿပီးး ဝတ္မိတာပါေနာက္ေနာင္ ဝတ္ေတာ့ဘူးး
photo and video- Shin Yoon Myat
ဂယက်ထနေတဲ့ ဘရာဇီယာမပါပဲ ကလပ် ကနေ Live လွှင်ပြတယ်ဆိုသော လုံးကြီးပေါက်လှမော်ဒယ် ရှင်ယွန်းမြတ် ဗီဒီယိုLive လွှင်ပြီး ၅ မိနစ်အတွင်း ပြန်ဖျက်ခဲ့ပေးမယ့် ပရိတ်သတ်တွေ အကြားပျံနှံသွားပြီး ယခုလို ရေပန်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာယကံရှင် ရှင်ယွန်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ နောက်ဆို Live လွှင့်တာ ဆင်ခြင်သွားပါပြီး ဆိုပြီး ယခုလို post ရေးတင်ထားပါတယ်။808 နေ့က liveလွှင့်မိပါတယ်..လုပ်မိလုပ်ရာ တင်ပြီးး ၅မိနစ်လောက်နေတော့ ဖျက်ခိုင်းကြလို့ ဖျက်လိုက်တယ်
ဒါကို အခုမှ ဘယ်ကရလို့လာတင်နေကြတာပါလိမ့် ကိုယ်က မျက်နှာပဲကြည့်မိတာအပြင်မှာ အဲ့လောက် အကျႌ မပါးးသလိုလည်း ပါ ပါတယ်….အဲ့ဒီလို လည်ပင်းးအပြဲ အဟိုက်တွေ နဲ့ ဝတ်တဲ့ဟာမျိုးး ဝတ်ထား ပါတယ်အရက်သေစာလည်း မသောက်မူးယစ်ဆေးဝါးလဲ မသုံးထားပါဘူးးး
စုံတွဲကြိုးကြာက ကော်ဖီသောက်ပြီးး ကဲတာရသောက်နည်းလို့ နှုတ်ခမ်းခြောက်လို့ လျှာသက်တာပါ…. မျက်လုံးကလဲ မျက်ကပ်မှန် တပ်ထား လ်ု့ပါ….ရှုတင်ကအပြန်ဝင်မိတာ နောက်နောင် live ဆိုဆင်ခြင်ပြီမစာမနာတွေ သိပ်မန့်ကြတာဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူးးအဝတ်အစားဝတ်တာဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ဝတ်တော့မယ်အဲ့နေ့က အဲ့လို ဝတ်မိတာ..,ပုံထဲ သိပ်မဆိုးးလှပါဘူးလေဆိုပြီးး ဝတ်မိတာပါနောက်နောင် ဝတ်တော့ဘူးး
ကိုဗစ် ဖြစ်ရင် အဖြစ်ခံ လိုက်မယ် ကာကွယ်ဆေးတော့ မထိုးချင်ဘူး ဆို တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ချစ်မမဖြူ ရဲ့ အသေးစိတ် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အပီအပြင်ဓာတ်ဖမ်းပေး‌ပြီး ပြုံး ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ကျော်ထက်အောင်
နေ့ခင်းဘက်ကြီး ကားတံခါးဖွင့်ပြီး ပိုက်ဆံ အိတ် အလုခံ လိုက်ရတဲ့ မယ်လိုဒီခေါင်
ရွှေရင် အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပလွန်းနေတဲ့ ချောကလျာ